Isikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt Sisungula iShedyuli entsha yaseBusika: Iinqwelomoya eziya kwiindawo ezingama-244 kumazwe angama-92
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Isikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt Sisungula iShedyuli entsha yaseBusika: Iinqwelomoya eziya kwiindawo ezingama-244 kumazwe angama-92
isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Ukukhutshwa kweendaba • uthutho • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Anzeigetafel *** Inkcazelo yasekuhlaleni ***
Ishedyuli entsha yasebusika iqala ukusebenza kwisikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt (FRA) ngo-Oktobha 31. Ithayimthebhile ibonisa inani elipheleleyo leenqwelo-moya ze-83 eziqhuba iinqwelomoya zabahambi ukuya kwiindawo ze-244 kumazwe angama-92 kwihlabathi jikelele.
Iinqwelomoya ezintsha eziya e-US zifumaneka kwi-FRA
Frankfurt Ishedyuli yasebusika inenani elikhulu leenqwelomoya eziya eCaribbean nakuMbindi Merika
Iindawo ezininzi zokuya zaseYurophu zigcinwe kwishedyuli yasehlotyeni eFRAPORT
Ngokunyuswa ngokuthe ngcembe kwezithintelo zokuhamba ezinxulumene nobhubhane, iindawo ezininzi zokusingwa kunye neenqwelomoya zinokongezwa ngesaziso esifutshane kwishedyuli. Xa kuthelekiswa nezinye izikhululo zeenqwelo moya eJamani, iFRA iya kuphinda ibonelele ngolona khetho lubanzi lonxibelelwano kobu busika. Oku kugxininisa indima yeFrankfurt njengeyona ndawo inkulu kunye neyona ibalulekileyo yezophapho zamazwe ngamazwe. Ucwangciso olutsha lwasebusika luya kuhlala lusebenza de kube ngumhla wama-26 kuMatshi, ngo-2022.
Iinqwelomoya ze-2,970 ngeveki (ukuhamba), ngokomndilili, zicetywa ukuqala kwexesha lasebusika ngoNovemba. Oko kungaphantsi kweepesenti ezingama-30 kunexesha elilinganayo lika-2019/2020 (ngaphambi kobhubhane), kodwa ngeepesenti ezili-180 ngaphezulu kunobusika buka-2020/21. Itotali yenani leenqwelomoya ezicwangcisiweyo ziquka iinkonzo zasekhaya ezingama-380 (zangaphakathi kweJamani), iinqwelomoya ezingama-620 zamazwekazi, kunye ne-1,970 yoqhagamshelo lwaseYurophu. Zizonke izihlalo ezingama-520,000 ziyafumaneka ngeveki - malunga neepesenti ezingama-36 ngaphantsi kwenani lika-2019/2020.
Iinqwelomoya ezininzi eziya e-US zifumaneka kwi-FRA
Inani leenqwelomoya eziya e-US lenyuke kakhulu, liqhutywa ngakumbi sisibhengezo sase-US sokuvula ilizwe ukusuka nge-8 kaNovemba ukuya kwiindwendwe zangaphandle- ukuba zigonywe ngokupheleleyo kwaye zibonelela ngovavanyo olubi lwe-Covid-19 ngaphambi kokuhamba.
Kukho unxibelelwano oluqhelekileyo olusuka kwi-FRA ukuya kwiindawo ezili-17 zase-US kwixesha elizayo lasebusika. I-Lufthansa (LH), i-United Airlines (UA), kunye ne-Singapore Airlines (SQ) ziza kunduluka ukuya kwisiXeko saseNew York yonke imihla. Ukongeza, umthwali wezolonwabo waseJamani uCondor (DE) uya kusebenza iinqwelomoya ezintlanu ngeveki ukuya kwiBig Apple ukusuka ngoNovemba.
1. Ngenxa yoko, kuya kubakho iinqwelomoya ezifikelela kwisihlanu ngosuku ukusuka e-FRA ukuya nokuba nguJohn F. Kennedy (JFK) okanye eNewark (EWR). I-Delta Airlines (DL) nayo iya kubhabha yonke imihla ukuya eNew York-JFK ukusuka phakathi kuDisemba. Ngaphezu koko, i-United Airlines kunye neLufthansa iya kubonelela ngeenqwelo zeenqwelo ze-20 ngeveki ukuya eChicago (ORD) naseWashington DC (IAD).
I-Lufthansa kunye ne-United bobabini baya kubhabha yonke imihla ukuya eSan Francisco (SFO) naseHouston (IAH), naseDenver izihlandlo ezilishumi elinesibini ngeveki. I-Lufthansa kunye ne-Delta ziza kusebenza ngeenqwelo moya eziya e-Atlanta (ATL) kalishumi ngeveki.
Ezinye iindawo zase-US zibandakanya iDallas (DFW) kunye neSeattle (SEA) (enikezelwa yiLufthansa kunye neCondor), kunye neBoston (BOS), iLos Angeles (LAX) kunye neMiami (MIA) (enikezelwa yiLufthansa). Ngaphaya koko, iLufthansa iza kubonelela ngenkonzo kathandathu ngeveki e-Orlando (MCO) kunye nenkonzo kahlanu ngeveki ukuya eDetroit (DTW), kwaye iza kubhabha isiya ePhiladelphia (PHL) kathathu ngeveki. Ukuqala phakathi kuDisemba, inkampani yaseJamani i-Eurowings Discover (4Y) iya kuqhuba iinqwelomoya ukuya eTampa (TPA) kane ngeveki.
Iindawo ezinomtsalane zeholide zasebusika
Ithayimthebhile entsha ye-FRA ineendawo ezininzi ezahlukeneyo zokuya kuMbindi Merika nakwiCaribbean. Umzekelo, iCondor, iLufthansa, kunye ne-Eurowings Discover ziza kubonelela ngeenkonzo kwiindawo ezinomtsalane zokufikela iiholide eMexico, eJamaica, eBarbados, eCosta Rica naseDominican Republic. Oku kuquka iinqwelomoya rhoqo ukuya ePunta Cana (PUJ; 16 amaxesha ngeveki) kunye Cancún (CUN; ukuya ezimbini mihla).
Iinqwelomoya ezininzi ziyaqhubeka nokubonelela ngeenqwelomoya ukusuka eFrankfurt ukuya kwiindawo ezikuMbindi nakwiMpuma Ekude. Kuxhomekeke kuphuhliso lwe-Covid-19 yezithintelo zokuhamba ezibekwe ngamanye amazwe aseAsia, inani loqhagamshelo kwiMpuma Ekude linokwanda ngakumbi. Imeko ihlala inamandla: iThailand, umzekelo, iceba ukuvula imida yayo ngoNovemba. Iinqwelomoya eziya eSingapore (SIN) eziqhutywa yiLufthansa kunye neSingapore Airlines ngaphakathi kwendawo yepaseji yokuhamba yabakhweli abagonyiweyo nazo ziya kufumaneka ngexesha lasebusika.
Uninzi lweenqwelomoya ziphinde zaqala iinkonzo ukuya kwiindawo zaseYurophu ukusuka kwiFRA kweli hlobo. Ezi ngoku ziya kuqhubeka ngexesha lasebusika. Kuya kwenzeka ukubhabha usuka e-FRA uye kuzo zonke izixeko ezikhulu zaseYurophu amaxesha amaninzi ngemini. Ishedyuli yasebusika ikwabandakanya inani leendawo zokukhenketha ezidumileyo phakathi kweYurophu, kubandakanya iZiqithi zeBalearic, iiCanaries, Greece, Portugal, kunye neTurkey.
Ulwazi oluhlaziyiweyo kwiinqwelomoya ezifumanekayo lunokufumaneka apha www.frankfurt-airport.com